Ogolaanshaha deganaanshaha ee GOBOLKA YURUB
waxaa qoray: Max Csern Maajo 11, 2021
Waxaa jira fursado badan oo lagu helo rukhsadda deggenaanshaha Yurub. Qaarkood way adag yihiin, kuwa kalena way ka fudud yihiin. Dhammaan waxay kuxirantahay sharciyada socdaalka ee dowlad gaar ah, codsadaha duruufaha nololeed iyo ujeedooyinka guuritaanka. Sidaa darteed, ma jiro nidaam guud oo loogu talagalay sida ugu dhakhsaha badan uguna fudud ee loo helo rukhsadda deggenaanshaha Yurub. Gobollada qaarkood, nidaamkan ayaa u sahlanaan doona Ruushka, halka kuwa kale ay ku adkaan doonaan xaalado kala duwan oo dheeri ah. Ka dib markii aan falanqeynay sharciyada socdaalka ee afar iyo toban dal oo Yurub ah iyo khibrada dadka aan u dhalanay halkaas, waxaan sameynay dulmar guud. Akhrintiisa kadib, akhristayaashu waxay awoodi doonaan inay ogaadaan halka ugu sahlan ee laga heli karo rukhsad degenaansho iyo deganaansho rasmi ah oo Yurub ah. Sababaha suurtagalka ah ee soo saarista ogolaanshaha joogitaanka ee hay'adaha socdaalka ee dowlad gaar ah iyo wadarta kharashka hawsha ayaa sidoo kale lagu soo bandhigay halkan.
Ogolaanshaha joogitaanka ee wadamada Yurub
Ikhtiyaarrada lagu helo ogolaanshaha joogitaanka ee Yurub badan. Qaarkood way adag yihiin, kuwa kalena way ka fudud yihiin. Dhammaan waxay kuxirantahay sharciyada socdaalka ee dowlad gaar ah, codsadaha duruufaha nololeed iyo ujeedooyinka guuritaanka. Sidaa darteed, habka cuntada ee caalamiga ah ayaa ka dhakhso badan oo fudud in la helo Oggolaanshaha joogitaanka ee Yurub, maahan. Gobollada qaarkood, nidaamkan ayaa u sahlanaan doona Ruushka, halka kuwa kale ay ku adkaan doonaan xaalado kala duwan oo dheeri ah. Ka dib markii aan falanqeynay sharciyada socdaalka ee afar iyo toban dal oo Yurub ah iyo khibrada dadka aan u dhalanay halkaas, waxaan sameynay dulmar guud. Akhrinta ka dib, akhristayaashu way awoodi doonaan inay ogaadaan meeye habka ugu fudud ee lagu helo rukhsada degenaanshaha и Deganaanshaha joogtada ah ee Yurub... Sababaha suurtagalka ah ee soo saarista ogolaanshaha joogitaanka ee hay'adaha socdaalka ee gobol gaar ah iyo wadarta guud ee kharashka hawsha ayaa sidoo kale lagu soo bandhigay halkan.
Faa'iidooyinka ogolaanshaha joogitaanka ee Yurub
Waxaa jira sababo badan oo Ruushku ugu helo rukhsad degenaansho Midowga Yurub. Waa kuwan kuwa ugu waaweyn:
Heer sare iyo tayo hoy.
Dhaqaalaha xasilloon, oo si togan u saameeya sameynta iyo horumarka ganacsiga.
Suurtagalnimada helitaanka amaahda amaahda ee dulsaarka bangiga oo hooseeya.
Awoodda lagu furayo deebaajiga bangiyada yurub oo leh qiimeyn lagu kalsoonaan karo.
Lama taabtaanimada keydka shaqsiyadeed, dhigaalka, maalgashiga iyo hantida gaarka loo leeyahay.
Safar bilaash ah oo fiiso la’aan ah gobolada EU iyo dalal badan oo adduunka ah oo soo gabagabeeyay heshiisyo khuseeya Midowga Yurub.
Helitaanka waxbarasho tayo leh iyo daryeel caafimaad, shaqooyin mushahar badan qaata.
Dad badan, ogolaanshaha joogitaanka Midowga Yurub waa talaabada ugu horeysa ee lagu qaadanayo dhalashada Yurub.
Aaway meesha ugu fudud iyo sida loo helo rukhsad degenaansho
Su'aasha ah meesha ugu sahlan ee lagu helo rukhsadda deggenaanshuhu waa mid muran badan. Waa lagama maarmaan in la tixgeliyo heerka fayo-qabka muhaajiriinta, da'da, waxbarashadda, xaaladda bulsho iyo waxyaalaha kale ee dheeriga ah. Guud ahaan, xulashooyin adag iyo, sida waafaqsan, caqabado badan oo dhanka maamulka ah ayaa kajira wadamada dhaqaalaha ku barwaaqaysan oo aan u baahnayn inay soo jiitaan soogalootiga. Kuwaas waxaa ka mid ah Boqortooyada Ingiriiska, Iswidhan, Luxembourg, Holland. Isla mar ahaantaana, ruqsadda degenaanshaha Yurub waxaa lagu bixin karaa iyadoo loo raacayo barnaamijyo gaar ah oo ka shaqeeya dhowr gobol. Ujeedada barnaamijyada noocan oo kale ah waa in lagu soo jiito khubaro takhasus u leh suuqa gudaha. Sidoo kale, ogolaanshiyaha joogitaanka ee Yurub waxaa badanaa la siiyaa maalgashadayaasha hodanka ah ee awooda inay maalgashadaan qadar cayiman dhaqaalaha gobolka. Celcelis ahaan, cabirkiisu wuxuu ka bilaabmaa 350 kun €, iyo qaabka maalgashiga wuu ka duwan yahay. Waxaa ka mid ah xulashooyinka ugu muhiimsan ee helitaanka oggolaanshaha joogitaanka ee Yurub, waxaad u baahan tahay inaad tilmaamto:
Iibsiga hantida ma guurtada ah ee Midowga Yurub qiimo aan ka yarayn qaddar go'an. Tani waa mid ka mid ah qaababka ugu caamsan ee lagu helo rukhsadda degenaanshaha EU. Waxay ku habboon tahay maalqabeenno badan oo reer Russia ah oo doonaya inay u guuraan Midowga Yurub.
Maalgashiga dhaqaalaha deegaanka. Kuu ogolaanayaa, marka lagu daro helitaanka ogolaanshaha joogitaanka, waa faa'iido inaad ku maalgeliso keydkaaga keydka Yurub ama ganacsi deggan oo faa'iido leh.
Diiwaangelinta shirkaddaada iyo abuurista shaqooyin dadka deggan. Faa'iidada ugu weyn ee ikhtiyaarkan ayaa ah fursadda ganacsade inuu ku horumariyo ganacsigiisa xaalado wanaagsan oo xasilloonida dhaqaale, maqnaanshaha musuqmaasuq iyo caqabadaha xafiisyada.
Guurka iyo muwaadin ama muwaadin u dhashay wadan ka tirsan Yurub.
Helitaanka ogolaanshiyaha joogitaanka ee Yurub iyada oo loo marayo shaqo hoos timaad barnaamij gaar ah oo bixinaya gabagabada heshiis furan oo lala leeyahay shaqo-bixiye maxalli ah. Shaqaalaha xilliyeed ee shaqeeya muddo cayiman uma qalmaan shuruudahan.
Mideynta qoyska. Fursaddan waxaa isticmaali kara qaraabada dhow ee muwaadin EU ah - xaasaska iyo carruurta, iyo mararka qaarkood waalidiinta (hawlgab, saboolka, naafada).
Waxbarashada machad waxbarasho oo leh aqoonsi dowladeed. Wadamada qaarkood, ruqsada degenaanshaha ee EU sidoo kale waxaa loo bixiyaa qaadashada koorsooyin lagu barto laguna hagaajiyo luuqada maxaliga ah.
Shaqada sayniska ee qandaraaska la leh hay'ad waxbarasho ama cilmi baaris.
Shaqada la xiriirta joogitaanka dhulka dal ka mid ah Yurub. Shaqaalaha waaxaha diblomaasiyadeed iyo wakiillada rasmiga ah (sayniska, ganacsiga, dhaqanka) waxay ku hoos jiraan qaybtaan.
Koorsada daaweynta iyo baxnaaninta muddada-dheer.
Ogolaanshaha joogitaanka ee Midowga Yurub mudnaan gaar ah. Waxaa lagu bixiyaa shakhsi ahaaneed, badanaa amar shakhsi ahaaneed ee madaxa gobolka ama wareegtada baarlamaanka.
Oggolaanshaha joogitaanka qaranka - in la ilaaliyo aqoonsiga qaran ama dhaqan.
Kadib markuu helo ogolaanshiyaha joogitaanka, qof ajnabi ah wuxuu helayaa xaq uu ku siiyo intaas kadib deganaanshaha rasmiga ah ee yurub, iyo waliba dookhyo kale oo dheeri ah. Tusaale ahaan, qofka noocaas ahi wuxuu ku kasban karaa dhul qorshaysan lahaansho gaar ah wuxuuna ku dhaqaaqi karaa ficillo kale oo sharci ahaan muhiim ah oo ajaanibta kale aysan geli karin. Marka xigta, waxaan tixgelin doonnaa nusuusta helitaanka rukhsadda deggenaanshada ee Yurub, halkaas oo ay ka sahlan tahay kana jaban tahay tan.
Xulashada ugu badan ee doorbidida helitaanka ogolaanshaha joogitaanka Austrian waa RWR-Karte. Kani waa waxa loogu yeero "kaarka casaanka-casaanka-casaanka" ee la siiyo khubarada aqoonta u leh. Codsadayaasha RWR-Karte waa inay ka gudbaan jeeg hay'adaha dawladda si loogu hoggaansamo heerarka xirfadeed ee la dejiyey, oo ay ku jiraan dhowr shuruudo oo kala duwan.
Qiimaha. Diiwaangelinta rukhsadda degenaanshaha oo leh kaarka casaanka-casaanka-cas waxay ku kacaysaa 30 illaa 100 kun €.
Xaaladaha. Badanaa, ganacsatadu waxay codsadaan qaabkan dhalashada Austria. Waxaa looga baahan yahay inay ra'yi ka helaan waaxda shaqaalaha ee gobolka ee ku saabsan faa'iidooyinka ay howlaha ganacsi u leeyihiin dhaqaalaha dalka.
Shakhsiyaadka qiimaha badan leh - xaaladdu uma oggolaanayso inay ka shaqeeyaan oo ka ganacsadaan Austria. Waxaa lagu soo saaray kootooyin aad u kooban oo ka mid ah gobollada federaalka. Codsadaha waxaa looga baahan doonaa inuu keeno caddeyn dukumiinti ah oo celcelis ahaan dakhli bille ah ugu yaraan 2000 € qof kasta oo ka tirsan qoyskiisa. Mid ka mid ah bangiyada ka shaqeeya Austria, waa inay jiraan ugu yaraan 20 kun € oo loogu talagalay qof weyn iyo 10 kun oo loogu talagalay ilmaha yar.
Kaarka buluuga ah. Khabiirro la shaqaaleeyay ayaa la heli karaa haddii ay casuumaad rasmi ah ka helaan loo shaqeeye Austrian ah, heshiiska shaqada oo tirada daqliga bishii uusan ka yareyn 4100 €.
Suurtagalnimada in la kordhiyo rukhsadda deggenaanshada ee la helay waxay kuxirantahay heerka isdhexgalka muwaadin ajnabi ee nolosha bulshada maxalliga ah. Waa inaad si joogto ah u horumarisaa xirfadahaaga luqadeed, aad carruurta ku meeleysaa goobaha waxbarashada ee deegaanka, aadna soo saartaa siyaasadaha caymiska caafimaadka iyo bulshada.
Siyaabaha ugu caamsan ee lagu helo rukhsad degenaansho Boqortooyada Belgium waa:
Qandaraaska shaqada ee loo shaqeeyaha Beljam.
Iibsiga shirkad ganacsi oo horey uga diiwaan gashanayd Beljam.
Halkan ka furitaanka meheraddaada, iyada oo ku xidhan cashuurta laga jaro sannadlaha ah ugu yaraan € 90 kun. Taasi waa, si aysan shirkaddu u male awaal ahayn, laakiin ay si firfircoon u shaqeyso.
Qiimaha diiwaangelinta - laga bilaabo 30 kun €.
Xaaladaha. Bixinta rukhsadaha shaqada ee Boqortooyada Belgium ayaa si adag loo xaddiday. Kooto dheeraad ah ayaa loo qoondeeyay khabiiro takhasus leh oo ka shaqeeya qaybta IT-teknolojiyada, daryeelka caafimaadka, dadka aqoonta injineernimada leh. Sidoo kale waa suurtogal in la helo sharci deganaansho ardayda ka diiwaangashan jaamacadaha Beljamka.
Way ka fududdahay helitaanka deganaashaha halkan marka loo eego Galbeedka Yurub. Sababaha ugu waaweyn ee halkaan loogu bixiyo waa:
Helitaanka faa'iidooyinka hawlgabka.
Iibsiga dhismaha guryaha.
Diiwaangelinta xafiiska wakiilka ee shirkad ganacsi oo leh diiwaangelin khasab ah hay'adaha canshuuraha.
Bilaabidda ganacsi iyada oo loo abuurayo in ka badan darsin jagooyin muwaadiniinta Bulgaria ah
Gabagabada midowga guurka muwaadin / Bulgaria madaniga ah ama wadan EU ah.
Jiritaanka xididdada qowmiyadaha Bulgaariya.
Xaaladaha. Codsaduhu waxaa ku waajib ah inuu buuxiyo shuruudaha, iyadoo kuxiran ujeedooyinka socdaalka. Inaad guri ka yeelato Bulgaria - ama ha lahaato ama ha noqoto heshiis waqti dheer ah, iyo qaabkii aad ku noolaan lahayd. Diiwaangeli heerka dakhligaaga oo dalbo caymiska caafimaadka caymiska. Shuruudaha tixgelinta arjiga la gudbiyay kama badnaan karaan 1 bil.
Kharashaadka. Haddii ujeedada bixinta deggenaanshaha ay tahay iibka dhismaha, markaa qiimaheedu waa inuu ka badan yahay 300 kun €. Maalgashadayaasha, heerka ugu hooseeya ee maalgashiga waa ,125 50, waana in kuwani ay noqdaan goobo horumarsan, maahan caasimada iyo xarumaha waaweyn. La wareegida hantida maguurtada ah ama maalgashiga waxaa fulin kara shaqsiyaadka oo keliya, laakiin sidoo kale hay'adaha sharciga ah. Markaa xuquuqda rukhsadda deggenaanshuhu waxay helayaan milkiilayaasha qaab-dhismeedkan ganacsi, oo iyagu leh in ka badan 2% raasamaalkeeda la oggol yahay. Ajaanibta u dalbanaysa sababo kale awgood, waxaa lagama maarmaan ah in lacag ka badan XNUMX kun oo yuuro dhigato.
Qaadashada dhalashada UK way adagtahay. Habka ugu fiican ee lagu helo rukhsad degenaansho halkan waa inaad isticmaasho dalab VIP ah. Qaabkan la fududeeyay ayaa ah in lagu helo xaalad siddeed toddobaad gudahood iyada oo lagu beddelayo maalgashi muhiim ah. Ikhtiyaarrada maalgashiga ee soo socda ayaa suurtagal ah:
Iibsiga dammaanadaha dowladda.
Iibsiga saamiyada maalgalinta maxalliga ah.
Helitaanka danaha shirkadaha ka diiwaan gashan jasiiradda oo ah deganayaasha canshuuraha UK.
Xaaladaha. Markaad maal gashanayso, waxaad isticmaali kartaa oo keliya raasamaalkaaga, oo aanad amaahin lacag. Asalka lacagta la maal galiyay waa in la diiwaan galiyaa. Marka lamaanaha is qaba ay helaan sharci degenaansho ee Boqortooyada Midowday, wadarta hantidooda maalgashiga waa la tixgelinayaa.
Kharashaadka. Si aad u hesho rukhsad degenaansho Ingiriis ah iyada oo loo marayo bixinta VIP ee la fududeeyey, waxaad u baahan doontaa inaad ugu yaraan £ 2 milyan ku maal gasho horumarinta dhaqaalaha waddanka. Xawaaraha bixinta deganaanshaha rasmiga ah ee xiga wuxuu si toos ah ugu habboon yahay cabbirka hantida la maal-galiyay:
2 ilaa 5 milyan oo rodol - 5 sano.
5 ilaa 10 milyan - 3 sano,
In ka badan 10 milyan - 2 sano.
Waxaa laga yaabaa in waddankan uu yahay ikhtiyaarka ugu fiican ee dadka reer Ruushku ay la yaaban yihiin deggenaanshaha deggenaanshaha Yurub: halka ay ka sahlan tahay kana jaban tahay in laga helo. Hangari, waxaa suurtagal ah in loo soo saaro sida ugu dhakhsaha badan ee suurtogalka ah marka loo eego dalalka kale ee EU - saddex toddobaad gudahood. Xulashooyinkaan waxaa la siiyaa dadka haysta xoogaa lacag ah.
Kharashaadka. Qaddarka maalgashiga waa inuu ka badnaadaa 300 kun € qoyskiiba codsadaha. Waxaa intaa dheer, lacag hal mar ah oo ah 60 kun € ayaa la bixiyaa.
Xaaladaha. Barnaamijka socdaalka dhaqaalaha wuxuu bixiyaa maalgashi toos ah oo maaliyadeed oo loogu talagalay curaarta dowladda oo leh dammaanad soo celin muddo shan sano gudahood ah. Kadib bixinta ogolaanshaha joogitaanka seddex isbuuc gudahood, maalgashaduhu wuxuu dalban karaa deganaansho rasmi ah lix bilood kadib. Fursadaha kale waxaa ka mid ah:
Furitaanka shirkad ganacsi oo leh raasamaal la oggol yahay ugu yaraan 10 kun oo yuuro. Waa inay ku dhaqaaqdaa dhaqdhaqaaq ganacsi oo firfircoon oo ay ku bixiso canshuuraha miisaaniyadda. Ogolaanshiyaha joogitaanka lama siinayo qofka ganacsiga iska leh oo keliya, laakiin sidoo kale qoyskiisa oo dhan.
Iibsiga guryaha ma guurtada ah ee buuxiya shuruudaha qaarkood. Xadka ugu yar ee qiimaha laguma qoro halkan, laakiin celceliska qiimaha guryaha ee ku yaal bannaanka hangariyanku kama badnaan 25 kun €. Intaas waxaa sii dheer, koontada codsadaha iyo mid kasta oo xigtadiisa ah waa inuu lahaadaa in ka badan 6 €.
Xaaladaha kor ku xusan, helitaanka deganaansho rasmi ah waxay suurtagal tahay oo keliya seddex sano kadib, iyo dhalashada Hangari - ka dib 5 sano oo kale. Tani waxay ku siinaysaa wadar ahaan siddeed sano.
Jarmalka waxaa lagu kala soocaa heer aad u sarreeya oo nolosha dadka ah iyo, sidaas darteed, tiro aad u tiro badan oo dad ah oo doonaya inay halkan u soo guuraan deganaansho rasmi ah. Sidaa darteed, way adag tahay in la helo rukhsad degenaansho gudaha Jarmalka, gaar ahaan dhacdooyinka dhowaan dhacay - qulqulka muhaajiriinta aan la xakamayn ee ka imanaya Bariga Dhexe iyo gobolka Afrika. Xulashada ugu jaban ee lagu helo ogolaanshaha joogitaanka ee Yurub iyadoo loo marayo adeegyada socdaalka Jarmalka waa maalgashi lagu sameeyo dhaqaalaha Jarmalka ugu yaraan nus milyan €. Marka, waad furan kartaa shirkad ay ka shaqeeyaan shan muwaadin oo Jarmal ah. Hal shuruud oo dheeri ah: muwaadin u dhashay Jamhuuriyadda Federaalka Jarmalka ama qof haysta deganaansho rasmi ah wuxuu noqon karaa agaasimaha guud.
Fursadaha kale ee suurtogalka ah:
Kali ahaanshaha dhaqaalaha. Xaddiga ugu yar ee koontada codsadaha waxaa si madax-bannaan u dejiya mid kasta oo ka mid ah waddamada FRG.
Kaarka Buluuga ah. Waxaa bixiya kaliya xirfadlayaal aqoon sare leh oo dibada ka soo casuumay loo shaqeeye maxalli ah.
Maalgelinta ganacsi gobol gaar ah. Codsaduhu waa inuu ahaadaa mid dhaqaale leh, leh khibrad ganacsi, iyo inuu bixiyo qorshe ganacsi oo faahfaahsan. Tan iyo sanadkii 2012 heerka ugu hooseeya ee maalgashiga xaaladan waa la joojiyay.
Waxaad sidoo kale ka heli kartaa ogolaanshiyaha joogitaanka halkan sababahan soo socda:
Wax ku barto goob waxbarasho oo maxalli ah.
Shaqaalaynta rasmiga ah
Bixinta magangalyo siyaasadeed.
Marka laga soo tago asalka wadamada kale ee EU, dalabyada socdaalka ee mas'uuliyiinta Griiga waxay umuuqdaan kuwo aad uqurux badan. Waa suurtagal in la helo sharci degenaansho Midowga Yurub bil gudaheed. Tani waxay u baahan doontaa maalgashi qaddar ah hantida ma guurtada ah ama dhaqaalaha Giriigga. Tani waxay noqon kartaa:
Abuuritaanka ganacsi ganacsi oo cusub ama iibsashada mid jira. Qaddarka kharashyada waa inuu ka badnaadaa 300 kun €.
La wareegida hantida maguurtada ah 250 kun € halkii codsade, ama 500 kun qoyskiiba.
Xaaladaha. Maal-galiyaha waxaa la siiyaa tirada ugu badan ee faa'iidooyinka. Shuruudda looga baahan yahay degitaanka qasabka ah ee Giriigga 183 maalmood sanadkiiba waa la joojiyaa. Ikhtiyaarka noocan oo kale ah oo leh ku dhowaad 100% suurtagalnimada ayaa damaanad qaadaya bixinta rukhsadda deggenaanshaha
Fursadaha kale. Muhaajiriinta dhaqaale ahaan hodanka ah waxay ugu yaraan 24 kun oo Yuuro dhigi karaan akoonadooda bangiyada Griiga midkood. Haddii guuritaanka loo qorsheeyo qoyska oo dhan, markaa waxay noqon doontaa mid xiiso leh in la maalgaliyo 20% xaaskiisa iyo 15% kale oo loogu talagalay cunugga yar. Sidoo kale waa inaad haysataa dukumiinti xaqiijinaya celceliska dakhliga bishii ee ka badan 2 kun €.
Marka laga hadlayo siyaasada socdaalka, boqortooyadan Scandinavian-ka waxaa loo tixgeliyaa inay tahay tan ugu EU-da ugu dhawrista iyo xidhan. Bixinta ogolaanshaha joogitaanka halkan waxay la xiriirtaa kootooyin adag. Habka ugu fudud ee lagu heli karo rukhsadda deggenaanshaha deenishku waa maalgashi ganacsi: ka furitaanka meherad aad iska leedahay halkan, iibsashada shirkad ganacsi oo hore u jirtay ama qayb ka mid ah saamigeeda.
Kharashaadka. Maalgashiga ugu yar waa inuu ka badnaadaa 50 kun €.
Xaaladaha. Shirkadda la furayaa waa inay lahaataa muwaadiniin deenish ah oo gobolka jooga, sidoo kalena u hoggaansan dhammaan shuruudaha looga baahan yahay cashuurta, shaqada iyo sharciyada kale ee dalka. Oggolaanshaha joogitaanka haddii ay dhacdo maalgashi ganacsi waxaa la siiyaa 12 bilood, waana inay cusbooneysiisaa sanadkiiba 3 sano.
Sida uu qabo sharciga Irishka, si loo helo rukhsad degenaansho, maalgashi isku dhafan ayaa loo oggol yahay: maalgashiga dhaqaalaha iyo helitaanka hanti ma guurto.
Kharashaadka. Qiimaha ugu yar waa ugu yaraan hal milyan €. Kuwaas, wax aan ka badnayn 50% ayaa loo oggol yahay in lagu kharash gareeyo dhismaha, inta soo hartayna waa inay ku baxaan qaab maalgashi xagga dhaqaalaha jasiiradda. Tani waxay noqon kartaa iibsiga dammaanadaha ganacsiga dadweynaha ama kuwa gaarka loo leeyahay, iibsashada saamiga ganacsiga, ama shirkad dhan oo shaqeyneysa.
Xaaladaha. Maalgashiga waa in la sameeyaa iyada oo aan la isticmaalin lacagaha amaahda ah. Maalgashadahu waa inuu soo bandhigaa dukumiintiyo xaqiijinaya maalgashiga isaga u gaar ah, maahan lacagaha bangiga. Xubnaha qoyskiisa, rukhsad degenaasho ayaa la siiyaa iyada oo aan lacag kale la bixin iyo maalgashiyo kale.
Iibsiga hantida maguurtada ah ee qadar cayiman oo Spain ah, waxaa suurtagal ah in la helo "sharci degenaansho dahabi ah". Waad iibsan kartaa degaan, ganacsi ma guurto ah, ama dhul.
Kharashaadka. Maalgashiga ugu yar ee lagu helayo "rukhsad degenaansho oo dahabi ah" waa 500 kun €.
Xaaladaha. Muddada hawshu kama badnaanayso bil. Kadib helitaanka xaaladdan, waa ku filan tahay qof ajnabi ah inuu sii joogo Spain wax aan ka badnayn 1 maalin sanadkii. Xaaladda la helay ma siineyso fursad ay ku galaan waxqabad kasta oo shaqo ah. Tani waxay u baahan doontaa ruqsad gooni ah. 5 sano kadib, waad dalban kartaa deganaansho rasmi ah, haddii aad boqortooyada ku nooleyd 10 sano, waxaad dalban kartaa dhalashada Isbaanishka.
Iibsashada curaarta dowladda oo ku kacaya € 2 milyan.
Maalgalinta in kabadan million 1 milyan oo ah saamiyada shirkadaha Isbaanishka ama helitaanka qayb ka mid ah raasumaalka la oggol yahay.
Furitaanka deebaaji mid ka mid ah bangiyada boqortooyada 1 milyan €.
Abuuritaanka ganacsi boqortooyada iyadoo shaqo abuur loogu sameynayo muwaadiniinta Isbaanishka ah. Sharciga socdaalku ma go'aaminayo cabirka mashruuca maal-gashiga xagga lacagta, laakiin shirkaddu waa inay si firfircoon u hawl-gashaa, iyadoo siisa dakhliyada canshuuraha miisaaniyadda. Sidoo kale waa qasab in la waafajiyo xeerka shaqada iyo shuruudaha kale ee sharciga deegaanka.
Marka loo eego sharciyada socdaalka ee talyaaniga, bixinta ogolaanshiyaha joogitaanka halkan waxay leedahay qaab shaqsi ahaaneed, iyadoo la tixgelinayo dhowr arrimood. Sidaa darteed, codsadaha looma balan qaadayo 100% go'aan togan oo ku saabsan arjiga la gudbiyey. Iyada oo ku saleysan khibrada helitaanka rukhsad degenaansho Talyaani ah, waxaan dhihi karnaa sida ugu macquulsan waa in shaqo laga helo urur maxalli ah. Qandaraaska shaqo ee shisheeyaha wuxuu bixiyaa: bixinta daryeelka caafimaadka, bixinta guryaha iyo ilaalinta bulshada. Waad heshiin kartaa ka hor intaadan Talyaaniga gelin iyo ka dib markaad goobta timaado labadaba.
Fursadaha kale. Furitaanka shirkad ganacsi oo kuu gaar ah. Maalgashiga bilowga ah ee ganacsigu waa inuu ka badnaadaa 10 kun oo yuuro. Waxaad sidoo kale u baahan doontaa inaad ka hesho rukhsad maamulka degmada si aad u furto ganacsi iyo shati siinta nashaadaadka nuucaan ah. Mararka qaar labadan marxaladood ayaa ugu dhib badan.
Qubrus sidoo kale waxay leedahay barnaamij maalgashi oo u gaar ah, kaas oo kuu ogolaanaya inaad halkan ku soo saarto ogolaanshiyaha joogitaanka iyada oo lagu badalayo la wareegida hantida maguurtada ah.
Kharashaadka. Xulashooyinka helitaanka ogolaanshaha joogitaanka waxaa la bixiyaa marka la soo gabagabeeyo warqad iibsi oo lala leeyahay guri gaaraya 300 € ama ka badan. Xaalad dheeri ah waa caddeyn dukumiinti oo dakhli sanadle ah oo kor u dhaafaya 15 kun €, oo lagu daray 5 kun oo kale € halkii xubin ee qoyska ah ee codsadaha.
Xaaladaha. Haddii shuruudaha la dejiyey la buuxiyo, go'aanka saxda ah ee arjiga la gudbiyey waxaa lagu gaarayaa saddex bilood gudahood. Helitaanka hantida maguurtada ah oo qiimaheedu gaarayo 300 kun ayaa sidoo kale bixinaysa helitaanka ogolaanshaha joogitaanka, laakiin leh dammaanad qaad ka hooseeya iyo muddo hawlgal dheer. Sidoo kale, xaaladda waxaa la soo saari karaa oo keliya hal sano, iyada oo loo baahan yahay cusbooneysiin dambe.
Jumhuuriyaddan Baltiga ah, markii aad iibsaneysid dhisme maaliyadeed qaddarkeedu yahay 250 kun €, waa loo oggol yahay inuu helo "oggolaansho degenaansho oo dahabi ah" Xaaladaha dheeraadka ah:
Kaliya hal shay oo dhisme ah ayaa lagu iibsaday qiimahan.
Waa mamnuuc in la iibsado dhul madhan, oo aan horumarin lahayn.
Qiimaha cadastral ee hantida la iibsaday waa inuu ka badnaadaa 80 kun €.
Kharashaadka. Markaad iibsaneyso shay ma guurto ah lahaanshaha, codsadaha ruqsada degenaanshaha Latvia waa inuu bixiyaa lacag dhan 5% qiimaheeda. Taasi waa, qiimaha ugu yar ee la oggol yahay ee 250 kun, waxay noqon doontaa 12,5 kun €.
Fursadaha kale. Maalgelinta ganacsiga maxalliga ah ugu yaraan 35 kun €. Xaaladdan oo kale, shuruudaha soo socda ee soo socda waa in sidoo kale la buuxiyo:
Shaqaalaha shirkaddu waxay kor u dhaafeen 50 qof.
Dhaqdhaqaaqa sanadlaha ah ee shirkaddu waa ugu yaraan 10 milyan €.
Dakhliyada canshuuraha sanadlaha ee miisaaniyada - laga bilaabo 40 kun €.
Markaad maalgelinayso ganacsi in ka badan 150 kun oo yuuro, codsaduhu wuxuu awood u yeelan doonaa inuu helo rukhsad degenaansho Latviya ah iyada oo aan lagu xidhin shuruudo dheeraad ah.
Halkan waxaa loo oggol yahay in lagu codsado rukhsad degenaansho marka la furayo urur ganacsi oo leh saddex shaqo oo loogu talagalay muwaadiniinta Lithuania. Isla mar ahaantaana, waxay qaadan doontaa illaa 4 bilood in lagu diiwaangeliyo xaaladda.
Kharashaadka. Cabirka maalgashiga bilowga ah ee ganacsigu waa inuu ka badnaadaa 28 kun €.
Xaaladaha. Qofka ajnebiga ahi wuxuu xaq u leeyahay inuu codsado ogolaanshiyaha joogitaanka lix bilood ka dib markuu meheraddiisa ka furto Lithuania. Saamiga uu ku leeyahay caasimadda shirkaddu waa inuu ka badnaadaa 1/3, halka isagu laftiisu xubin ka yahay guddiga ama agaasimaha.
Fursadaha kale. Waxaad sidoo kale ka iibsan kartaa ganacsi diyaar ah Lithuania, ama waxaad ka furan kartaa xafiiska wakiilka maxaliga ah ee shirkaddaada oo ka diiwaan gashan dal kale. Xaaladahaas oo kale, shuruudaha ayaa sidiisii ​​ahaanaya - abuuritaanka 3 boos oo shaqaalaha ah oo loogu talagalay muwaadiniinta Lithuania.
Ajaanibta hodanka ah ee ku nool Luxembourg, waxaa loogu talagalay bixinta ogolaanshiyaha joogitaanka iyada oo aan xaq loo lahayn in la shaqeeyo oo la ganacsado. Codsaduhu waa inuu diiwaangeliyaa xaaladdiisa dhaqaale oo uu guri ka iibsadaa xajmigan.
Kharashaadka. Codsadaha rukhsadda Luxembourg waa inuu ku leeyahay in ka badan 25 kun € koontadiisa.
Fursadaha kale. Waa loo oggol yahay qofka ajnebiga ah inuu helo ogolaanshiyaha joogitaanka oo uu xaq u leeyahay inuu shaqeeyo, markuu dhammeeyo heshiiska shaqada mid ka mid ah ururada maxalliga ah. Soogalootiga waa inuu u shaqeeyaa sidii shaqaale.
Malta gudaheeda, rukhsad degenaasho lama siinayo oo keliya iibsiga, laakiin xitaa marka guri la kiraysto.
Kharashaadka. Magaalooyinka iyo gobollada kala duwan ee dalka, waxaa jira marinno maalgashi oo kala geddisan oo lagu iibsan karo guryaha. Waxay u dhexeeyaan 220 ilaa 275 kun euro. Markaad kireysato guryaha, xaddiga bixinta kirada ee sannadlaha ah waa inay ka badnaataa 9,6 kun € magaalooyinka ugu waaweyn, iyo 8,7 kun oo ka tirsan miyiga. Sida uu dhigayo sharciga Malta, kireyste helay ogolaanshiyaha joogitaanka sidoo kale wuxuu bixin doonaa khidmad canshuur ah oo dhan 15 kun oo yuuro dhammaan qoyska sannad kasta.
Xaaladaha. Diiwaangelinta rukhsad degenaansho ayaa la oggol yahay kahor iibsiga ama iibsiga kirada. Xaaladdan oo kale, dalabka waxaa tixgelinaya mas'uuliyiinta socdaalka 8 bilood gudahood. Haddii la oggolaado, qofka ajnebiga ah waa inuu, sannadka soo socda gudahood, ku iibsadaa hanti ma guurtada ah halkan milkiyad shaqsiyeed ama kiro ah. Haddii kale, xaaladdeeda waa la tirtiri doonaa.
Fursadaha kale. Deganaanshaha rasmiga ah ee wadanka oo leh heer fayo qab sidoo kale wuxuu heli karaa ogolaanshaha joogitaanka Malta. Xadka ugu yar ee dakhliga sanadlaha waa inuusan ka hooseyn 25 kun €. Sidoo kale, haddii kale, codsaduhu wuxuu yeelan karaa qadar shaqsiyadeed oo ka badan nus milyan yuuro. Haddii aad qorsheyneyso inaad u guurto Malta qoyskaaga, markaa kani waa mid kale oo lagu daray 150 kun oo xubin kasta oo ka mid ah xubnaheeda. Dhawaan, barnaamijka socdaalka "Oggolaanshaha deganaanshaha ee maalgashiga" ayaa lagu soo bandhigay jasiiradda.
Waxaa jira fursado EU caadi ah oo lagu helo ogolaanshaha joogitaanka - shaqo, waxbarasho machad maxalli ah, isu keenista qoyska, iwm. Waxyaabaha gaarka ah ee la siinayo waxaa ka mid ah sharci degenaansho oo loogu talagalay ganacsatada ajaanibta ah ee doonaya inay ganacsigooda ka furaan boqortooyadan. Qaabka ugu caansan ee looga ganacsado halkan waa LLC. Celcelis ahaan, waxay qaadataa ilaa afar bilood in la furo bulsho.
Kharashaadka. Awoodda shirkad ganacsi furitaankeeda waa inay ka badato 18 kun €.
Shuruucda socdaalka ee Poland waxay u oggol yihiin bixinta oggolaasho joogitaan ganacsade ajnabi ah haddii uu u dhaqmo sidii milkiilaha ama maareeyaha shirkadda.
Kharashaadka. Heerka raasumaalka ee shirkad ka diiwaangashan Poland waa inay ka badnaataa 1300 €, celcelis ahaanna sanadlaha waa 13 kun €.
Xaaladaha. Shaqaalaha shirkad ajnabi ah waa inay ahaadaan ugu yaraan laba muwaadin oo reer Poland ah. 5 sano kadib, ganacsade ajnabi ah wuxuu xaq u leeyahay inuu dalbado deganaansho rasmi ah.
Fursadaha kale. Hab kale ayaa ah in la furo shirkad ganacsi, halkaas oo muwaadin reer Poland ah, ama mid ka mid ah waddamada Midowga Yurub, loo magacaabi doono agaasime ama guddoomiyaha guddiga. Shuruudaha diiwaangelinta ayaa weli ah sidii hore.
Waxaa jira barnaamij hijrood ah oo ku saabsan helitaanka sharci deganaansho ee Yurub waqti aad u yar. Marka, markaad iibsaneyso hanti ma guurtada ah, qof ajnabi ah wuxuu awood u yeelan doonaa inuu ku helo ogolaanshiyaha joogitaanka laba bilood gudahood. Intaa waxaa dheer, tani ma khusayso oo keliya codsadaha laftiisa, laakiin isla markiiba qoyskiisa oo dhan iyada oo aan wax kharash ah oo dheeri ah lahayn.
Kharashaadka. Waxaad ka iibsan kartaa hal ama dhowr shay hal mar. Shuruudda ayaa ah in wadarta qiimaha iibku uu ka bato 250 kun €. Kharashyada dheeraadka ah ee diiwaangelinta xaaladdu waa 10 kun oo yuuro oo kale.
Xaaladaha. Waa lagama maarmaan in la iibsado ka hor inta aan loo gudbin dalab adeegyada socdaalka. Codsiga siinta xaaladda waa in la soo gudbiyaa ka hor inta uusan dhicin 90 maalmood laga bilaabo taariikhda soo gelitaanka waddanka.
Bixinta mudnaanta ee ogolaanshaha joogitaanka ee Boortaqiiska ayaa sidoo kale la siiyaa maalgashadayaasha maal gashaday ugu yaraan hal milyan oo euro dhaqaalaha waddanka. Qaabka maalgashiga wuxuu noqon karaa mid kasta - iibsashada saamiyada ama damaanadaha kale, saamiga shirkad ganacsi oo Bortuqiis ah.
Furitaanka ganacsi Boortaqiiska oo bixinaya in ka badan 10 boos oo loogu talagalay muwaadiniinta reer Bortuqiiska. Qaabka ugu badan ee ganacsi looga ganacsado halkan waa shirkad saamileyaal wadaag ah oo xidhan.
Helitaanka rukhsad degenaansho Romaaniya waa nidaam aad u adag. Maalgashadayaasha ajaanibta ah ee halkan jooga waxay mas'uul ka yihiin adeeg dawladeed oo gaar ah ARIS. Shaqaalaheeda waxay si taxaddar leh u hubiyaan mashruuc kasta oo maalgashi oo ay soo bandhigaan ganacsatada ajaanibta ah.
Kharashaadka. Si loo furo ganacsi ama lacag loo maalgaliyo, shirkadaha Romania waxay u baahan doonaan ugu yaraan 100 kun €.
Xaaladaha. Mashruuc ganacsi oo faahfaahsan ayaa loo gudbiyay maamulka ARIS, kaas oo bixiya 15 meelood oo loogu talagalay muwaadiniinta Romania. Oggolaanshaha joogitaanka ee ganacsatada ajaanibta ah ayaa la soo saaraa muddo hal sano ah, ka dib markii loo baahdo inay cusbooneysiiso sanadkiiba 5 sano. Dhamaadka muddadan, waxaa loo oggol yahay in la codsado deggenaansho rasmi ah.
Helitaanka ogolaanshiyaha joogitaanka ee Slovakia looma fulinayo sababo jira awgood, laakiin ujeedada gaaritaanka himilooyinka muhaajiriinta:
Bilaabida ganacsi kuu gaar ah.
Hawlaha sayniska iyo waxbarashada.
Sidoo kale waa suuragal inaad hesho sharci degenaansho Slovak ah, haddii aad haysato kaarka buluugga ah ee Midowga Yurub, oo ku saleysan mideynta qoyska, inaad tahay qof Slovak ah. Xulashada ugu fudud ee Ruushka ayaa ah inay furaan oo ay ku ganacsadaan ganacsigooda Slovakia. Foomka doorbidida waxqabadka ganacsigu waa LLC. Isdiiwaangelintu badanaa waxay qaadataa in aan ka badnayn 4-5 bilood.
Kharashaadka. Codsadaha ruqsada degenaanshaha Slovakku waa inuu ugu yaraan haystaa 23 kun oo koonto bangi. Raasamaalka la oggol yahay ee shirkadda la furayo wuxuu dhaafey 5 kun €.
Xaaladaha. Codsaduhu waa inuu diiwaangeliyaa awooddiisa maaliyadeed, u soo gudbiyaa qorshe ganacsi adeegyada socdaalka, iibsashada ama kireynta meel lagu noolaado ee waddanka, oo uu soo saaro caymiska caafimaadka. Ogolaanshiyaha joogitaanka waxaa la heli karaa muddo lix bilood ilaa labo sano ah, ka dib markaa waa in la cusbooneysiiyaa.
Habka ugu fudud uguna dhaqsaha badan ee lagu helo rukhsad degenaansho ee Slovenia waa inaad iska diiwaangeliso shirkaddaada halkan ama aad maal gashato shirkad maxalli ah oo jirta. Laba qof ayaa codsan kara xaaladdan hal mar: milkiilaha shirkadda, oo haysta ugu yaraan 51% raasumaalka la oggol yahay, iyo agaasimaheeda. Ereyga tixgelinta arjiga siinta heerka ayaa qaadanaya qiyaastii. 1 bil.
Kharashaadka. Maalgashiga ganacsi waa inuu noqdaa 50,0 kun €.
Xaaladaha. Qofka ka furaya ama shirkad ka samaynaya Slovenia sidoo kale waa inuu iibsadaa ama kireysto meel lagu noolaado halkan. Helitaanka ogolaanshiyaha joogitaanka waxay suurtagal tahay oo keliya ka dib diiwaangelinta rasmiga ah ee shirkadda ee hay'adaha canshuuraha. Nidaamkani wuxuu qaadan karaa 3 ilaa 5 bilood. Waxaa sii dheer xaalada - waxay siineysaa qofka ajnebiga ah inuu ka shaqeeyo Midowga Yurub.
Laba nooc oo rukhsad degenaansho ah ayaa halkan lagu bixiyaa:
Qaybaha "A" - oo isdaba-joog ah, ayaa la soo saaray 4 sano. Ku habboon bilowga iyo ka ganacsiga Finland.
Qeybta "B" - ku meel gaar ah, muddada tababarka ama ka shaqeynta qandaraaska muddada-go'an.
Sharciga socdaalka ee Finland wuxuu si gaar ah daacad ugu yahay maalgashadayaasha shisheeye. Tirada diidmada ee la siinayo ogolaanshaha joogitaanka dadka noocaas ah ayaa dhaqan ahaan aad u yar, habka loo maro helitaanka xaaladuna kama badnaan karo lix bilood muddadaas.
Kharashaadka. Raasamaalka la oggol yahay ee shirkad shisheeye ka furay Finland waa inuu ka badnaadaa thousand 2,5 kun, iyo dakhliga shaqsiyeed ee codsadaha waa inuu ka badnaadaa thousand 1,5 kun.
Xaaladaha. Ugu yaraan kalabar xubnaha guddiga ganacsiga waa inay noqdaan muwaadiniin Midowga Yurub. Ganacsadaha ajnabiga ah waa inuu sidoo kale bixiyaa mashruuc ganacsi oo faahfaahsan. Haddii kale, sharciga Finland wuxuu daacad u yahay maalgashadayaasha ajaanibta ah:
Ma jiraan wax shuruudo ah oo ku saabsan cabbirka wareegga shirkadda.
Ma jiraan wax shuruud ah oo ku saabsan qaab shaqo abuur loogu sameeyo muwaadiniinta Finnishka ah.
Ma jiro marin ka hooseeya qaddarka maalgashiga.
Waa ku filan tahay shirkadda inay shaqeyso, canshuuraha waxay ku dhacaan miisaaniyadda, mushaharna waxaa la siiyaa shaqaalaha.
Shakhsiyaadka dhaqaalaha haysta ee ku nool Faransiiska, waxaa jira barnaamij loogu talagalay in lagu siiyo ogolaansho deganaansho doorbid ah. Run, ma bixinayso ogolaansho lagu sameeyo ganacsi gaar loo leeyahay ama shaqo. Nidaamka diiwaangelinta wuxuu qaadanayaa illaa lix bilood.
Kharashaadka. Mid ka mid ah bangiyada Faransiiska, codsaduhu waa inuu haystaa ugu yaraan 30 kun €. Intaas waxaa sii dheer isla qaddarka mid kasta oo ka mid ah xubnaha qoyskiisa ee codsanaya sharciga deggenaanshaha.
Xaaladaha. Si loo xaqiijiyo jiritaanka dhaqaalaha, waxaad u baahan tahay inaad siiso shaqaalaha hay'adda socdaalka dukumiintiyo ku saabsan heerka dakhliga, qaansheegta iyo heshiiska iibsiga ama kireysiga deganaanshaha Faransiiska.
Maalgashi. Si aad u hesho ogolaansho joogitaan oo mudnaan leh, waxaad u baahan tahay inaad ugu yaraan € 10 milyan ku maal gashato dhaqaalaha Faransiiska. Maalgashadahu waa inuu helaa ugu yaraan 30% saamiyada ama saamiyada urur ganacsi. Haddii shirkad cusub la abuuro, shaqaalaheeda waa inay ka kooban yihiin in ka badan 50 shaqaale ah.
Xaaladda ganacsi. Waxaa bixiya maamulaha shirkada iyo qoyskiisa.
Shaqaalaha Secondary. Waxaa la siiyay shaqaalaha shirkadaha shisheeye, laamaha iyo xafiisyada wakiillada ee ka diiwaangashan Faransiiska.
Halkaan, muwaadin ajnabi ah oo sifiican looqabto wuxuu si fudud kuheli karaa ogolaanshiyaha joogitaanka markii uu diiwaangaliyo shirkad ganacsi oo kutaala Croatia.
Kharashaadka. Tirada ugu yar ee raasumaalka la oggol yahay kama yarayn 2,7 kun €.
Xaaladaha. Codsadaha sharciga degenaanshaha wuxuu leeyahay ugu yaraan 51% shirkad ka diiwaan gashan Croatia. Haddii xaaladdan la buuxiyo, qofka ajnebiga ah wuxuu helayaa rukhsad u oggolaanaysa inuu ku sameeyo wax soo saar iyo hawlo ganacsi. Isla mar ahaantaana, lama mamnuucayo haddii shirkaddu leedahay boqolkiiba boqol saamiga raasumaalka shisheeye.
Fursadaha kale. Waa la oggol yahay in la dalbado rukhsad deggenaansho oo loogu talagalay dadka ajnebiga ah ee haya jago maamul shirkad ka diiwaangashan Croatia. Cabirka mushaharku waa inuu ahaadaa heerka celceliska qaranka, taas oo ah, qiyaastii 1,1 kun €. Awoodda urur uu furay qof ajnabi ah waa inuu ka badnaadaa 13 kun €, shaqaalahooduna waxay ka kooban yihiin saddex muwaaddin reer Croatia ah.
Way fududahay in la codsado ogolaanshiyaha joogitaanka maalgaliye ganacsi ee Czech Republic marka loo eego codsadayaasha kale. Nooca ugu caansan ee dhaqdhaqaaqa ganacsigu halkan waa LLC, maaddaama shaqsiyaad ganacsato ahi ay bixiyaan tabarucaad canshuuraha waaweyn. Isdiiwaangalintu waxay qaadataa ilaa bil, oo lagu daray bilo kale oo kale waxaad sugi doontaa ogolaanshaha joogitaanka. Dhamaan qoyska soogalootiga ah ayaa heli kara aqoonsi.
Kharashaadka. Wadarta qiimaha:
Diiwaangelinta sharciga deggenaanshaha laga bilaabo 1 kun thousand.
Diiwaangelinta LLC - 3 kun, oo xarunteedu tahay 7,5 kun €.
Diiwaangelinta JSC - 5 kun, oo xarunteedu tahay 140 kun €.
Codsaduhu waa inuu ku haystaa in ka badan € 3 koontada.
Xaaladaha. Waxaad u baahan tahay inaad iska diiwaangeliso shirkad kahor intaadan dalban rukhsadda deggenaanshaha Czech. Codsaduhu wuxuu noqon karaa aasaasaha shirkad ama agaasime, oo leh shati u dhigma.
Boqortooyadan Scandinavian-ka ayaa kamid ah gobolada ugu badan ee loo xiray tahriibayaasha Yurub. Si aad u hesho ogolaanshiyaha joogitaanka halkan, ganacsade waa inuu iska diiwaangeliyaa JSC halkan.
Kharashaadka. Isdiiwaangelinta shirkad Iswiidhan waxay ku kacaysaa 10 kun, si loo helo sharci deggenaansho - 2 kale oo kale. Xubnaha qoyska, waxaad sidoo kale u baahan doontaa inaad bixiso 250 additional dheeraad ah. Codsaduhu waa inuu haystaa qaddar ka badan 1250 kun € koontada, iyo 21 kun oo kale oo loogu talogalay afada iyo 10,5 kun oo carruur kasta ah.
Xaaladaha. Kaliya muwaadin Midowga Yurub ah ayaa xaq u leh in lagu qoro maareeyaha shirkadda.
Dadka go'aansada inay ka helaan ogolaanshaha joogitaanka ee Estonia waxaa la siiyaa fursad noocan oo kale ah oo ay ku maal gashadaan dhaqaalaha gobolka.
Kharashaadka. Qaddarka maalgashiga ugu yar wuxuu ka imanayaa 66 €, oo ah qaab noocyada soo socda ee hantida:
Lacagta shaqsiyadeed ee maalgashadaha ganacsiga.
Amaah dejin ah
Kharashka hantida ugu weyn ee shirkadda cusub ee la furay.
Xaaladaha. Shirkad diiwaangashan laakiin aan soo saarin dakhli isla markiiba waa la xakamayn karaa iyada oo suuragal ah khiyaali. Sidaa darteed, shirkad furan waa inay soo saartaa dakhli, haddii kale milkiilaheeda ayaa waayi kara sharciga deggenaanshaha. Shaqaaluhu waa inay noqdaan muwaadiniin Estonia ah. Si loo diiwaangeliyo shirkad, ganacsade ajnabi ah waa inuu soo bandhigaa qorshe ganacsi oo faahfaahsan, dukumiintiyo ku saabsan asalka raasamaalka bilowga ah iyo heshiis ku saabsan iibsashada ama kireysiga boos bannaan ee Estonia.
Ogolaanshaha degenaanshaha ee wadamada Yurubta ee ka baxsan Midowga Yurub
Albania, waa la oggol yahay in lagu helo rukhsad degenaansho fiiso “D” ah oo loogu talagalay dadka halkan ku leh guryahooda. Maaddaama waddan Adriatic ah ay caan ku tahay dadka jecel ciidaha badda, xulashadan ayaa baahi weyn loo qabaa.
Kharashaadka. Bartamaha caasimada dalka, qiimaha halkii mitir laba jibbaaran ee guryaha ma guurtada ah waa 800 €, iyo xaafadaha Tirana - 350. Xarumaha dalxiiska, qiimaha guryuhu wuxuu kor ugu kici karaa 1200 € halkii mitir.
Xaaladaha. Si wadajir ah ulasocodsiinta arjiga, waxaad ubaahnaan doontaa inaad keento caddeyn lahaanshaha meesha lagu noolyahay iyo xaddiga lacagta lagu noolaan karo. Ugu horreyntii, xaaladda ayaa la siiyaa sannad, ka dib cusbooneysiinta - laba jeer ka badan dhowr sano. Kadib waxaad dalban kartaa deganaansho rasmi ah.
Fursadaha kale. Nidaamka la fududeeyay ee helitaanka rukhsadda degenaanshaha Albaaniya ayaa sidoo kale khuseeya maalgashadayaasha ganacsiga. Diiwaangelinta shirkad cusub halkan kama qaadaneyso wax ka badan 1-5 maalmood, kharashkeeduna waa 250-400 €. Qaddarka xarafnimada si sharci ah looma qeexin. Maalgashadayaasha in ka badan € 100 galiyay dhaqaalaha dalka ayaa isla markiiba la siiyay dhalashada Albania.
Maamulkan yar ee Pyrenean-ka, waxaa jira fursado dhowr ah oo lagu helo rukhsad degenaansho:
Maalgashiga ganacsiga Andorran.
Iibsiga curaarta dowladda.
Xaaladaha kor ku xusan, xaddiga maalgashiga ugu yar wuxuu ka bilaabmayaa 350 kun €. Sidoo kale, codsaduhu waa inuu lahaadaa guri shaqsi ah ama kireysan halkan, oo ku nool yahay maamulka ugu yaraan 90 maalmood sanadkiiba.
Kharashaadka. Xisaabta keydka ee sanduuqa maaliyadeed ee gudaha INAF, waxaad u baahan tahay inaad ku wareejiso 50 kun € codsadaha laftiisa, oo lagu daro 10 kun oo kale oo xubin kasta oo ka tirsan qoyskiisa. Waxaa jira shuruud celceliska dakhliga sanadlaha ah: 36 kun oo codsadaha ah iyo 12 kun oo kuwa ku tiirsan ah.
Xaaladaha. Maaddaama Andorra aysan ka mid ahayn Midowga Yurub, oggolaanshaha joogitaanku si otomaatig ah uma siinayo xuquuqda degenaanshaha Midowga Yurub. Si tan loo sameeyo, waa inaad si gooni ah u dalbataa fiisaha Schengen.
Sida ugu fudud ee lagu helo rukhsad degenaansho ee Bosnia iyo Herzegovina waa in la diiwaangaliyo shirkad ganacsi oo kuu gaar ah. Codsiyada halkan lagu soo bandhigay ee maalgashadayaasha ganacsigu waa kuwo aad u yar.
Kharashaadka. Codsaduhu waa inuu haystaa in ka badan 1,5 kun € koontada dhigaalka.
Xaaladaha. Dhacdooyinka diiwaangelinta badanaa waxay qaataan 2 illaa 4 toddobaad, oo lagu daray isla qaddarka ayaa qaadan doona bixinta deggenaanshaha. Waxaa la siinayaa seddex sano, haddii aad leedahay guri kuu gaar ah ama kireysi muddo lix bilood ah ama ka badan.
Fursadaha kale. Iibsiga hanti ma guurto qiima kasta ha lahaadee. Waxaad u baahan doontaa inaad bixiso khidmad canshuur ah oo ah 2% qiimaha wax iibsiga iyo illaa kun euro oo loogu talagalay shaqada khubarada.
Way adag tahay in la helo rukhsad degenaansho oo Iceland ah, xitaa markaad iibsaneyso dhisme ma guurto jasiiradda oo aad furaneyso shirkad kuu gaar ah. Waddanku wuxuu leeyahay xannibaadyo adag oo xagga socdaalka ah, waxaana jira kuwa ka reeban oo keliya kuwa gacan ka geysanaya horumarinta dhaqaalaha-yar ee Iceland. Xaaladaha kale, in ka badan oo maalgashadaha ganacsi uu ku kalsoonaan karo waa bixinta fiiso badan oo galitaan ah.
Meel yar oo alpine ah, ikhtiyaarka ugu fudud ee lagu heli karo rukhsad degenaansho waa shaqo rasmi ah shirkad maxalli ah. Laakiin hal caqabad ayaa halkan ka jirta: kaliya dadka horey u haystay sharci degenaansho maxalli ah ama waddan kasta oo EU ah ayaa loo oggol yahay inay ka shaqeeyaan maamulka. Sidoo kale, codsaduhu wuxuu u baahan yahay takhasus gaar ah oo baahi looga qabo Liechtenstein.
Waa suurtagal in la helo rukhsad degenaansho halkan markaad diiwaangelineyso shirkad cusub.
Xaaladaha. Codsaduhu waa inuu noqdaa milkiilaha hantida ma guurtada ah ee ganacsiga dhulka Masedonia - goob iib ah, xafiis, aqoon isweydaarsi wax soo saar. Xeerarka socdaalka ee Macedonia ma aqbalayaan laba dhalasho. Sidaa darteed, Ruushka oo go'aansada inuu dego dalkan hore ee Yugoslavia waa inuu ka quustaa baasaboorkiisii ​​hore ee Ruushka.
Mabaadiida Monaco waa mid ka mid ah xarumaha adduunka ee loogu talagalay madadaalada badda iyo khamaarka. Iyadoo la raacayo, sicirka nolosha waa mid aad u sarreeya halkan, xitaa marka la barbardhigo deriska Faransiiska iyo Talyaaniga. Sidaa darteed, dad aad u taajirsan ayaa awoodi doona inay halkaan degaan. Xaqiijinta madaxbanaanidooda dhaqaale, soogalootiga waa inuu lahaadaa xisaab bangi oo dhan 250 kun €. Tixgelinta arjiga la gudbiyey waxay qaadataa 5 toddobaad.
Xaaladda Si aad ganacsi uga furato magaalada Monaco, waxaad uga baahan tahay rukhsad gaar ah maamulka iyo iibsiga xafiis ama hanti ma guurto oo ganacsi oo ku taal dhulka maamulku leeyahay. Awoodda ugu yar ee shirkad dhowaan la furay waxay ka timid 15 kun €. Ugu horreyntii, xaaladda ayaa la siiyaa sannad, ka dibna si isdaba-joog ah loogu talagalay 2 iyo 3 sano. Dhamaadka muddadan, soo galootiga wuxuu helayaa Visa Degane Deggane ah oo Monegasque ah, oo shaqeyneysa 10 sano. Waa la kordhin karaa tiro kasta oo jeer ah, iyada oo aan wax xaddidaad ahi jirin.
Habka ugu fudud ee lagu helo rukhsadda deggenaanshaha Norway waa inaad ka furto meherad aad iska leedahay halkan.
Kharashaadka. Kharashka diiwaangelinta wuxuu gaarayaa 13 kun € - waa tan intee in le'eg raasamaalka la oggol yahay ee shirkadda in la furo uu noqdo.
Xaaladaha. Codsaduhu waa inuu leeyahay khibrad dhanka ganacsiga ah waana inuu soo gudbiyaa mashruuc ganacsi oo faahfaahsan si ay uga fiirsadaan saraakiisha Norway. Kaliya muwaadin norwiiji ah ayaa loo magacaabi karaa jagada agaasime ama maamule shirkadeed.
Gobolka yar ee San Marino, oo ku wareegsan dhammaan dhinacyada dhulka Talyaaniga, habka ugu fudud ee lagu heli karo rukhsad degenaansho dadka hodanka ah. Si tan loo sameeyo, waxaad u baahan doontaa inaad caddeyso joogitaanka ugu yaraan 500 kun €, ama iibso hanti maguurto ah halkan isla qaddarkaas. Kadib helitaanka ogolaanshaha joogitaanka, si aad u codsato dhalashada San Marino, waxaad u baahan doontaa inaad sugto 30 sano oo kale.
Si aad u siiso rukhsad degenaansho Serbia ah, waa ku filan inaad halkan ka iibsato shirkad horay u shaqeyneysay, ama adiga oo aasaasaya ganacsi aad iska leedahay.
Kharashaadka. Hantida ugu yar ee la oggol yahay waa inay ahaataa ugu yaraan 500 euro, nidaamka diiwaangelintu wuxuu ku kacayaa 1200 €. Shirkadaha saamileyda ah, qadarka raasumaalka la oggol yahay ayaa ka sarreeya:
JSC - 10 kun.
CJSC - 25 kun.
Akoonka ganacsadaha waa inuu lahaadaa in ka badan 3,5 kun €.
Xaaladaha. Shuruudaha dheeraadka ah waxaa ka mid ah: joogitaanka mashruuc ganacsi iyo guryo shaqsiyadeed ama kiro ah oo ku yaal Serbia.
Fursadaha kale. Markuu caddeeyo kaligiis ahaanshahiisa iyo helitaanka guriyayn, shisheeyaha wuxuu helayaa ogolaanshiyaha joogitaanka muddo seddex sano ah. Qadarka wax iibsiga guryaha ma ahan sharci, in kasta oo mashaariicdan oo kale ay horeyba u tixgeliyeen saraakiisha Serbia.
Habka ugu fudud ee lagu helo rukhsadda deggenaanshaha Turkiga waa xaalad muddo-gaaban ah - oo aan ka badnayn 1 sano. Waxay isaga u soo saaraan sababahan soo socda:
Guurka muwaadin Turki ah.
Kharashaadka. Si loo helo xaaladda, shisheeyaha waa inuu ugu yaraan 5,5 kun oo € ku leeyahay koontadiisa shaqsiyadeed. Qiimaha wax iibsiga ee dhismaha ma xadidan sinaba. Nidaamka diiwaangelinta, waxaad bixin doontaa qiyaastii 2 kun €.
Xilligan, barnaamij ayaa lagu soo bandhigayaa Montenegro kaas oo kuu oggolaanaya inaad siiso rukhsad degenaansho maxalli ah dhammaan milkiilayaasha guryaha ee waddanka. Si tan loo sameeyo, waxaad u baahan tahay inaad keento caddeyn jiritaanka 3,65 kun oo euro oo ku taal koontada codsadaha. Ikhtiyaar kale ayaa ah inaad ka furato shirkad ganacsi oo kuu gaar ah waddankan.
Kharashaadka. Shuruucda socdaalka maxalliga ah ayaa aad daacad ugu ah maalgashadayaasha ganacsiga. Si loo furo shirkad kuu gaar ah, halkan waa ku filan tahay inaad haysato raasumaal 1 €, iyo xisaab bangi - 300 €.
Xaaladaha. Codsaduhu waa inuu lahaadaa caymis caafimaad, lacag ku jirta koontada oo uusan lahayn wax dambi ah.
Habka ugu fudud ee lagu dego Switzerland waxaa loogu talagalay ajaanibta gaar ahaan kuwa hodanka ah. Wakiillada socdaalka VIP, diiwaangelinta sharciga deggenaanshaha waxay qaadanaysaa ugu badnaan lix bilood. Qaddarka maalgashiga kiiskan waa inuu ahaadaa mid aad u muhiim ah. Laakiin faa iidooyinka ku noolaanshaha Switzerland aad ayey uga badan yihiin - oo ka bilaabma heer nololeed iyo nabadgelyo, iyo isu socodka xorta ah ee aagga Schengen.
Kharashaadka. Waxaa jira laba siyaabood oo lagu maalgeliyo wadar ahaan:
Passive, oo ah qaab hal-mar ah oo canshuur ah oo lagu bixiyo khasnadda dawladda Switzerland. Cabirkiisu waa 100 kun oo euro sanadkii.
Maalgashiga ganacsiga hawlgalka - laga bilaabo 1 milyan €.
Nidaamka diiwaangelinta wuxuu ku kacayaa CHF 50.
Xaaladaha. Ganacsade kasta oo raba inuu iska diiwaangaliyo ganacsigiisa Switzerland wuxuu la kulmi doonaa hab xulasho dhab ah. Waxaa jira codsadayaal badan, oo mas'uuliyiintu waxay doortaan kuwa ugu mudan iyaga dhexdooda. Sidaa darteed, bixinta isku-darka canshuurta waa hab macquul ah oo lagu helo ruqsadda degenaanshaha Switzerland.
Helitaanka ogolaanshiyaha joogitaanka ee Yurub
Sidaad arki karto, dowlad kasta oo Yurub ah waxay bixisaa xulashooyin u gaar ah. Sidaa darteed, qof kasta oo Ruush ah oo doonaya inuu u guuro halkaas waa inuu ka gudbaa dhowr shuruudood. Muwaadiniinta hodanka ah, ikhtiyaarka ugu faa'iidada badan ayaa ah inay maalgashadaan dhismaha. Haddii aad rabto inaad si xor ah ugu dhex wareegto Midowga Yurub oo dhan, ka dibna dooro ruqsadda deggenaanshaha ee waddamada Schengen.
La-taliye AAAA ayaa kaa caawin doona inaad ka mid noqotid ka qaybqaatayaasha mashaariicda maalgashiga ee dalalka daneynaya inay helaan dadka dhaqaalaha u madaxbannaan. AAAA ADVISER waa wakiil shati u leh barnaamijyada muwaadinimada rasmiga ah ee ku saleysan maalgashiga muhaajiriinta. Halkan waxaad ka heli doontaa caawimaad iyo talobixin khabiir ah oo ku saabsan dhammaan arrimaha helitaanka oggolaanshaha joogitaanka ama Dhalashada Jinsiyadda.
La xiriir khabiirkeena takhasuska ah waxaanan kaala talin doonaa dhamaan xulashooyinka aad ku heli karto ogolaanshaha joogitaanka, deganaanshaha rasmiga ah iyo Jinsiyada Labaad +79100007020
Booqo bartayada oo dhammaystiran: VNZ.SU
↑ ogolaanshaha joogitaanka ee wadamada yurub ↑ lagu daray ogolaanshiyaha joogitaanka ee Yurub ↑ halkee ugu fudud iyo sida loo helo sharci degenaansho ↑ meeye habka ugu fudud ee lagu helo rukhsada degenaanshaha ↑ sida loo helo sharci degenaansho ↑ hesho sharci deganaansho Yurub ↑ sida loo helo sharci degenaansho Yurub ↑ xagee ka sahlan tahay helitaanka sharciga deganaanshaha Yurub ↑ helitaanka ogolaanshiyaha joogitaanka ee Yurub ↑ ogolaanshaha joogitaanka ee wadamada aan Yurubta ahayn ↑ ogolaanshaha joogitaanka ee wadamada yurub ee aan ku jirin EU ↑ sharciga degenaanshaha maya eu ↑ ogolaanshaha joogitaanka ee aan ku jirin wadamada EU ↑ Oggolaanshaha joogitaanka Yurub ↑ Oggolaanshaha joogitaanka EU ↑
Ku laabo Wararka